UV Derma, waa gargaar looga hortagayo khataraha aan loo baahnayn ee maqaarkaaga | Wararka IPhone
Sannad kasta oo ka dambeeya waxay umuuqataa in dadku aad ugu mashquulsan yihiin helitaanka maqaar kaamil ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, taasna shaki la'aan tani waxay isku dhacdaa caafimaadka shaqsiga. The dhacdooyinka shucaaca UVA Maqaarka qaab dagaal ah waa dhibaato xusid mudan sidaa darteedna waxaa lagugula talinayaa inaad naftaada ku hareereysid dhammaan talooyinka suuragalka ah si looga fogaado cabsi daran. UV Derma waxay naga caawineysaa tan si hufan oo fudud, markaa waa waqtigii la fiirin lahaa.
1 Xogta la fiirinayo
2 oo xiiso leh
Xogta la fiirinayo
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee taagan ee ku saabsan UV Derma waa inaanan u baahnayn inaan ka dhex marno shaashadda wakhti kasta si aan u ogaanno wax kasta oo aan u baahan nahay inaan ogaano. Jaleeco, oo aan is rogrogin, waxaan haynaa xogta cimilada Maxaad maanta ku samayn doontaa meesha aan ku suganahay, ugu badnaan UV tusaalaha aan ku xanuunsaneyno, talooyinka aasaasiga ah ee looga hortagayo dhibaatooyinka iyo waqtiga ugu badan ee qorraxda la taliyay.
Waxay u muuqan kartaa inay yihiin xog badan hal mar, laakiin jaleecista arjiga subax kasta markaan ogaanno meesha macluumaad kastaa yaalo iyo micnaha ay na siineyso xasiloonida maskaxda ee ogaanshaha inaanan si xun u dhaqmi doonin maqaarkayaga.
Malaha howsha ugu faa iidada badan ee barnaamijka oo aan ku sameyn doonno waxoogaa dhacdooyin ah waa khadka dhexe ee buluugga ah halka labada Tusaha UV sida waqtiga ugu badan ee soo-gaadhista. Jaleecada fudud ee garaafku waxay ka dhigaysaa heerka soo-gaadhisu mid cad, iyada oo midabkiisaba la arki doono, halka haddii aan gujino waqtiga loo dejiyey waxaan geli karnaa tirinta oo noo sheegi doonta marka qaybteenna Lorenzo ay maanta dhammaato
Intaa waxaa dheer, codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku abuurto isticmaaleyaal kala duwan iyaga noocyada maqaarka ee kala duwan, sidaa darteed waxaan ku dari karnaa inta qof ee aan dooneyno inaan ka siino talo maqaarkooda. Maaddaama aan ka hadlayno talooyinka, waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo in kuwa aan arki karno qaarkood laga yaabo inay xoogaa xad dhaaf yihiin oo aan la wada lahayn, sida "U isticmaal shaati leh sawir-ilaalin", laakiin waa la fahmayaa goorta dalabku wuxuu ku yimaadaa taageerada Akadamiyada Isbaanishka ee Cilmiga Caafimaadka iyo Cilmiga Diinta iyo sidoo kale Fundación Piel Sana.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan wajaheynaa a app waxtar leh, xitaa aasaasiga ah haddii aan ku jirno xagaaga oo gebi ahaanba xor nahay. Hadda cudurdaar ma leh in la daryeelo maqaarka oo la sameeyo waxyaabo waalan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » UV Derma, waa gargaar looga hortagayo khataraha aan loo baahnayn ee maqaarkaaga
Qabyo, taliye, Net Speed ​​Pro iyo barnaamijyo kale oo bilaash ah ama iib ah hadda uun